Fampiharana Android: hevitra, famoahana vaovao, maimaim-poana ary maro hafa! | Androidsis (Pejy 8)
Ny maody maizina dia tonga amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra Viber amin'ny fanavaozana farany
Ny fampiharana fandefasan-kafatra Viber dia nahazo fanavaozana vaovao izay ahafahantsika mampiasa maody maizina
Ahoana ny fomba hamadihana ny Android ho metatra matihanina maimaim-poana
Atorinay anao ny fomba fanovana ny terminal Android ho metatra matihanina, halavirana, haavony, metatra zoro ary fitaovana maro hafa.
Ny sokay dia miharo amin'ny Google Maps amin'ny tanàna efatra any Espana
Fantaro misimisy kokoa momba ny fampidirana ny Google Maps sy ny Lime izay efa mamela ny mpampiasa hahita scooter elektrika any amin'ireo tanàna Espaniola.
Ry zalahy Mountain View, manatsara ny Google My Business amin'ny alàlan'ny Carousel tolotra orinasa
Ny lisitr'ireo orinasa Google dia mamela anao hamorona tolotra 10 hahitanao ireo fihenam-bidy ireo amin'ny vokatra tianao indrindra.
Vahaolana: Huawei Camera dia tsy mirakitra horonantsary HD, Smart Shot, Quick Snapshot ary fika maro hafa ho an'ny Huawei-nao
Avelako ianao miaraka amin'ny torohevitra mahaliana vitsivitsy sy ny vahaolana amin'ny olan'ny tsy fahafahanao manova ny kalitaon'ny firaketana ny fakantsary fakantsary Huawei.
Tutorial video: Ahoana ny fomba hampiasana maody maizina ao amin'ny Facebook Messenger
Raha te hanandrana maody maizimaizina alohan'ny hamoahana azy amin'ny fomba ofisialy amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra ianao dia ity no fomba ahafahanao manao azy.
Ahoana ny fampiasana emoji WhatsApp miafina
Fantaro misimisy kokoa momba ireo emojis vaovao natolotry ny kinova beta an'ny WhatsApp ary azo ampiasaina amin'ny fampiharana izao.
Ahoana ny fomba hampiasana ny fanamarinana dingana roa amin'ny WhatsApp
Tadiavo ireo dingana arahinao mba hampandeha ity fanamarinana dingana roa ity ao amin'ny kaonty WhatsApp anao ary manakana azy ireo tsy hiditra raha tsy mahazo alalana aminao.
Manisa amin'ny alàlan'ny fanaovana sary fanampiny, fanesorana ary maro hafa amin'ny Calculator Touch
Raha te hanana traikefa hafa be ianao toy ny kajy, Calculator Touch dia fampiharana vaovao hanoratanao famantarana amin'ny fihetsika.
Ny Galaxy S10 sy Galaxy M vaovao dia mahazo mari-pahaizana HDR sy HD, avy amin'ny Netflix
Ilay Galaxy S10 vaovao, ao amin'ireo kinova telo, miaraka amin'ny Galaxy M, ary koa ao amin'ireo kinova telo, dia nahazo mari-pahaizana HDR avy amin'ny Netflix
Ahoana ny fanovana ny anaran'ny fifandraisana ao amin'ny WhatsApp
Jereo ireo dingana arahinao mba hahafahanao manova ny anaran'ny olona mifandray aminao ao amin'ny WhatsApp amin'ny findainao Android.
Google Sheets dia mihoatra ny 500 tapitrisa alaina
Ny fampiharana hamoronana takelaka ampiasain'i Google maimaim-poana ho antsika dia nahatratra 500 tapitrisa ny fisintomana.
Google Play dia nohavaozina amin'ny fihetsika vaovao sy sivana hevitra
Jereo ireo fiasa vaovao efa tonga ao amin'ny Google Play. Hitanay ny sivana hevitra ankoatry ny fihetsika vaovao.
Fampiharana Android tsy dia fantatra loatra fa misy fampidinana mihoatra ny 100 tapitrisa
Jereo ireto rindranasa Android efatra ireto izay tsy dia fantatra loatra fa manana fampidinana mihoatra ny 100 tapitrisa ao amin'ny Google Play tsirairay.
Ny fampiharana TikTok dia nihoatra ny fisintahana iray tapitrisa tapitrisa manerantany ao amin'ny App Store sy Play Store
TikTok dia nahatratra dingana vaovao nahitana fisintomana maherin'ny XNUMX lavitrisa voasoratra manerantany tamin'ny alàlan'ny App Store sy Google Play.
Nova Launcher dia nohavaozina miaraka amina endrika vaovao marobe
Iray amin'ireo mpandefa tsara indrindra ho an'ny Android, Nova Launcher, izay vao nohavaozina nanampy asa vaovao sy manatsara ny sasany amin'ireo efa misy.
Ny fomba nanampian'ny Google Play fanatsarana ny fiarovana ny fampiharana iray tapitrisa
Fantaro misimisy kokoa ireo dingana noraisin'ny Google Play hanatsarana ny fiarovana ireo fampiharana mihoatra ny iray tapitrisa.
Ahoana ny fomba firaketana ireo antso WhatsApp amin'ny Android
Jereo ireto rindranasa Android ireto hahafahantsika manoratra antso WhatsApp amin'ny fomba tsotra amin'ny telefaona.
Ahoana ny fomba famonoana ny toerana misy an'i Facebook
Tadiavo ireo dingana arahinao mba hanafoanana ny toerana ao aorinan'ny Facebook izay manakana azy ireo tsy hahita ny toerana raha tsy mampiasa ilay fampiharana isika.
Amin'ny Q12 dia lasa adala izy ireo amin'ny volana martsa, afaka 8 andro monja dia hizara valisoa 21000 Euros izy ireo
Efa nolazaiko taminao tamin'ny fotoana maro momba ny fifaninanana finday tranainy Q12, fifaninanana nalefa mivantana tamin'ny ...
Ny rindranasa Razer Camera 2 dia efa mamela antsika hanoratra horonantsary amin'ny 60 fps
Ny rindranasa Razer Phone 2 dia navaozina vao nanampy fiasa izay tsy misy amin'ny ankamaroan'ny finday avo lenta eny an-tsena.
Ny hafatra Google dia mampifandray ny valiny feno fahendrena amin'ny teny espaniola
Fantaro misimisy kokoa momba ny fahatongavan'ireo valiny maranitra amin'ny teny espaniola amin'ny fampiharana Google Messages amin'ny Android.
WhatsApp dia efa miasa amin'ny fikarohana mandroso miaraka amin'ny sivana
Fantaro bebe kokoa momba ny fikarohana vaovao mandroso amin'ny alàlan'ny sivana izay hampidirina amin'ity taona ity ao amin'ny WhatsApp, satria izy ireo dia efa nanamafy avy amin'ilay fampiharana mihitsy.
Ny fanavaozana Telegram vaovao dia manampy fampidinana automatique sy playback an'ny horonan-tsary
Ny rindranasan-kafatra fandefasan-kafatra Telegram dia nahazo fanavaozam-baovao vaovao izay anampiana ny fanavaozana azy ireo ny horonan-tsary
Apple Music dia hifanaraka amin'ny Google Home
Tsy ho ela dia afaka mankafy ny serivisy mozika mivantana an'ny Apple amin'ny alàlan'ny Google Home izahay.
Ahoana ny fomba hiverenana amin'ny famolavolana Gmail taloha amin'ny Android
Fantaro bebe kokoa ny dingana tokony hatao mba hamerenana amin'ny laoniny finday Android ny famolavolana fampiharana Gmail taloha.
OPPO dia manolotra amin'ny fomba ofisialy ny zoom zoom 10x azy
Fantaro bebe kokoa momba ny teknolojia zoom optika 10x vaovao izay efa natolotr'i OPPO tamina hetsika talohan'ny MWC 2019 tany Barcelona.
Ny Facebook dia manala ny Onavo VPN amin'ny Google Play
Fantaro misimisy kokoa momba ny fanesorana an'i Onavo, ilay Facebook VPN nampiasain'ny tambajotra sosialy hanangonana vaovao avy amin'ireo mpampiasa Google Play.
Ahoana no hahitana izay fampiharana mampiasa RAM betsaka indrindra amin'ny Android
Jereo ny fomba ahitanao ny fampiasana vita RAM amin'ny alàlan'ny rindranasa napetraka amin'ny telefaona Android.
Waze Teams miaraka amin'ny WPP hanome anao doka tsara kokoa rehefa mitondra fiara ianao
Waze dia iray amin'ireo fampiharana mpamily ankafizin'ny olona. Fampiharana izay manana mpampiasa an-tapitrisany ary te-hampiseho dokambarotra tsara kokoa.
Ahoana ny fomba hanaovana tester beta ho an'ny WhatsApp amin'ny Android
Fantaro bebe kokoa momba ny fomba ahafahanao ho tonga tester WhatsApp beta amin'ny Android amin'ny fomba tsotra hazavaina amin'ny dingana.
Kiwi Browser dia mpizaha mailaka haingana sy mangina mahazo vahana
Browser web an'ny findainao Android antsoina hoe Kiwi Browser izay miavaka amin'ny alàlan'ny faingana dia haingana. Azonao atao koa ny milalao ny efijery.
Ity no tranonkala mpitety tranonkala tsara indrindra ho an'ny Android amin'izao fotoana izao
Raha mitady ny mpizaha tranonkala tsara indrindra ho an'ny Android ianao, ny haingana indrindra indrindra, dia tsy tokony halahelo ity lahatsoratra-manaraka ity ianao.
Ahoana ny fomba hamoronana lohateny mihetsika ho an'ny horonan-tsarinao amin'ny fomba tena tsotra
Tutorial video izay ampianariko anao hamorona lohateny tsara kalitao, lohateny mihetsika hampiasana amin'ny horonan-tsary na tantarao amin'ny Instagram, Facebook na WhatsApp.
WhatsApp dia mizaha ny algorithms any amin'ny fanjakany
Fantaro misimisy kokoa ny fanovana ataon'ny rindranasa ao amin'ny fanjakany izay mampiasa algorithms izay efa notsapaina tao amin'ny WhatsApp.
Tonga ao amin'ny Internet Internet ny interface One UI, ny mpizahatany marika koreana
Samsung Internet dia mpizaha tranonkala iray tena tsara izay azonao andramana amin'ny findainao Android miaraka amin'ny One UI, ilay interface noforonin'ny marika koreana.
Google Duo dia hampidirina ao amin'ny OxygenOS an'ny OnePlus
Ny sehatry ny fandefasan-kafatra Google, Google Duo, dia hampidirina ao anaty sosona manokana an'ny OnePlus
Ahoana ny fizarana tranokala amin'ny Google Maps
Mianara bebe kokoa momba ny fomba ahazoana tombony betsaka amin'ny fizarana Google Maps sy fahazoan-dàlana hanao tranokala amin'ny hafa.
Tetika dimy hanamboarana Telegram amin'ny Android
Jereo ireto tetika dimy ireto hivoahana bebe kokoa amin'ny kaontinao Telegram amin'ny Android ary ampanjifao ny fampiasana azy.
Google Pay dia nanampy banky telo vaovao tany Espana ary koa tany amin'ny firenen-kafa
Ny serivisy fandoavam-bola elektronika an'i Google, Google Pay dia efa mifanaraka amin'ny banky espaniola vaovao telo, ka manitatra ny fifankahazoany any Espaina ka hatramin'ny 15.
Ahoana ny fomba fanerena hampijanona fampiharana amin'ny Android
Jereo ny fomba tsotra izay ahafahana manery ny fijanonan'ny fampiharana amin'ny findainay Android amin'ny dingana tsotra vitsivitsy.
Ny Twitter dia hampiditra endrika fijerena maso
Fantaro misimisy kokoa momba ilay fijerena fijerena vaovao izay sedraina ny tambajotra sosialy ankehitriny ary ho avy tsy ho ela amin'ny fampiharana Twitter izy.
Ny fomba hanamboarana ny Google Play tsy hanavao ny fampiharana anao ihany
Fantaro misimisy kokoa momba ny fiarovana ny fanavaozana ao amin'ny Google Play sy ny fomba fampiasana ity fampiasa ity amin'ny Android.
Aiza ny findaiko?
Aiza ny findaiko? Raha nanontany ny tenanao matetika ianao tao amin'ny tranga iray hafa, ny fampiharana izay hatolotro anao dia azo antoka fa manampy be tokoa.
Pushbullet dia mbola velona ary salama tsara - nohavaozina miaraka amin'ny Material Design, maody maizina ary maro hafa
Fotoana angamba hamerenana ity app ity antsoina hoe Pushbullet, izay mamela ny fampifanarahana ireo rakitra, fampandrenesana ary hafatra.
Hihomehy ve isika?: Ahoana ny fomba hamoronana hafatra an-tsary mampihomehy miaraka amin'ny tarehy tsy afaka atao
Lahatsary izay ananako fotoana mandinihana fotoana fohy amin'ny rindranasa iray ahafahantsika mamorona hafatra an-tsary mahatsikaiky maimaim-poana,
Ny safidy tsara indrindra mankany Diskokosmiko
Tadiavo ireo fomba hafa azo soloina Diskokosmiko mba hampiakaranao na hampidinana mora foana ny karazana atiny rehetra.
Inona no atao hoe Deezloader ary ampiasaina amin'ny inona izy io?
Fantaro bebe kokoa momba ny inona ny Deezloader ary ny mahasoa azy amin'ny Android, ary koa ny fifandraisany amin'ny serivisy streaming mozika Deezer.
WhatsApp dia hamela ny fandavana ny fanasana amin'ny resaka anaty vondrona
Fantaro misimisy kokoa momba ilay fiasa vaovao novolavolaina tao amin'ny WhatsApp izay hahafahan'ny mpampiasa mandà ny fanasana amina chat group.
Gadgetbridge, ny loharanom-baovao misokatra amin'ny Pebble, Mi Band ary fampiharana hafa
Raha manana iray amin'ireo akanjo azo ampifandraisina amin'ny Gadgetbridge ianao dia azonao atao ny manolo ny fampiharana ofisialy azy ireo ary mahaleo tena.
Fomba fiasa 7 WhatsApp izay tokony ho fantatry ny rehetra fa tsy ny olon-drehetra mahalala
Lahatsary an-tsary asehoko anao torohevitra 7 na asa WhatsApp 7 izay tokony ho fantatry ny rehetra, na dia tsy ny olona rehetra aza no mahalala fa misy izy.
Google Play dia manampy ny "Hold for options" amin'ny fanoloana ireo teboka telo mitsangana
Ny Play Store dia nanomboka nanova ny fomba anehoana ny antsipirian'ny rindranasa na ny lalao hita eo amin'ny fonon'ny fampiharana.
WhatsApp dia manavao tanteraka ny famolavolana ny menio fanovana
Fantaro bebe kokoa momba ny famolavolana vaovao natolotr'i WhatsApp tao amin'ny menio fanovana ary misy ao amin'ny beta amin'ny fampiharana izany.
Ahoana ny fampidinana ny rakotra hira avy amin'ny tranombokiko mozika
Manaraka ny fangatahan'ny mpampiasa Androidsis Community tonga amiko amin'ny alàlan'ny ...
Google sy Apple dia samy manolotra fangatahana hanaraka ny vehivavy Saodiana ao amin'ny fivarotana misy azy ireo
Ny Absher dia fampiharana iray ahafahanao mifehy ny toerana misy ny vehivavy any Arabia Saodita amin'ny fotoana rehetra, mba hifehezana ny tsy fanandramany handao ny firenena.
Nosintona an'arivony tapitrisa ny browser an'ny Samsung
Ny browser-n'i Samsung dia nahatratra fisintomana iray tapitrisa lavitrisa tamin'ny alàlan'ny Play Store, isa tsy mampino raha jerena fa tsy Google Google izy io.
Ahoana ny fomba hialana amin'ny antso sy fanakanana ny fampandrenesana rehefa milalao amin'ny findainao Android ianao
Gaming Mode dia fampiharana vaovao ahafahanao manakana antso sy misoroka ny fampandrenesana rehefa milalao ny lalao tianao indrindra ianao.
Tsy ho ela dia ho hita ao amin'ny Google Maps ny fitetezana AR ho an'ny mpampiasa voafantina
Ny gazety amerikana The Wall Street Journal dia nanandrana ny fangatahana Google Maps niaraka tamin'ny fanohanan'ny AR sy namaky zavatra vitsivitsy.
Safidy tena tsara amin'ny Google Keep mifanaraka amin'ny dian-tànana sy ny interface Black AMOLED
Safidy manaitra ny Google Keep izay tokony hasongadina ny maody AMOLED Mainty, ny maizina ary ny fiarovana azy amin'ny alàlan'ny PIN na Fingerprint.
YouTube kinova 14.06 dia hahafahantsika maka horonantsary 1080
Amin'ny fanavaozana ny fampiharana YouTube amin'ny ho avy, ny fampiharana dia hanitatra ny vahaolana misy rehefa misintona horonantsary avy amin'ny lampihazo.
Hanomboka hanakana ny kaontin'ny mpampiasa mampiasa blockage doka i Spotify
Hatramin'ny 1 martsa dia hanomboka handrara ny kaontin'ireo mpampiasa mampiasa hacks i Spotify mba hialana amin'ny doka ny kinova maimaimpoana.
Ahoana ny fomba hanarahana orinasa amin'ny Google Maps
Jereo hoe ahoana no ahafahanao manaraka orinasa amin'ny fomba tena tsotra eo amin'ny Google Maps amin'ny Android ary fantaro ny tolotra sy fisondrotana.
Fampiharana Android misy tahiry angona
Jereo hoe iza amin'ireo rindranasa Android amin'izao fotoana izao no manana maody fitehirizana angona ary zahao ny fomba azo ampiasana azy.
Google Chrome dia mizaha maody maizina amin'ny Android
Fantaro misimisy kokoa momba ireo fitsapana voalohany notanterahin'i Google Chrome izay ahafahanao mahita ny maody maizimaizina amin'ny tranokala.
Ahoana ny fisoratana anarana amin'ny beta Spotify amin'ny Android
Jereo ny dingana tokony harahinao mba ho tonga tester beta ho an'ny Spotify amin'ny Android ianao ary andramo ireo fiasa vaovao rehetra an'ny app alohan'ny olon-kafa.
Ahoana ny fanatsarana ny tsiambaratelo amin'ny kaontinao Instagram
Jereo ireo fomba isan-karazany azonay ampiasaina hanatsarana ny fiarovana sy ny fiainana manokana ny kaontinay Instagram amin'ny Android.
Ny bug ao amin'ny Google Play Music dia tsy mamela ny fandefasana ireo hira farany amin'ireo mpandahateny na fahitalavitra mifanentana
Ny serivisy mozika streaming Google, Play Music, dia tsy mamela ny fandefasana ireo hira vaovao navoaka tamin'ny taona 2019 ho an'ireo mpandaha-teny marani-tsaina.
Azonao atao izao ny mampiasa ny VPN maimaim-poana izay hatolotry ny mpanamory Opera antsika amin'ny fanavaozana manaraka azy
Ny fanavaozana manaraka ny Opera ho an'ny Android dia hanome antsika VPN maimaim-poana tanteraka tafiditra ao anaty browser.
Ahoana ny fanovana ny karazana boaty inbox ao amin'ny Gmail
Jereo hoe ahoana no ahafahanao manova ny karazana boaty inbox amin'ny findainao Android amin'ny fomba tsotra.
Google Play dia hampandre anao momba ny fampiharana kalitao
Fantaro misimisy kokoa momba ilay fiasa Google Play vaovao izay manomboka andrana rehefa mandefa fampandrenesana momba ny fampiharana kalitao izy.
Ahoana no fomba hamoronana fonosana sticker ho an'ny WhatsApp tsikelikely. (sary misy mangarahara sy lahatsoratra)
Raha fotoana vitsivitsy lasa izay dia nanolotra fampiharana anao aho hamoronana sticker ho an'ny WhatsApp amin'ny tena saingy ...
Ny mpiara-manorina ao amin'ny Twitter dia manazava ny fomba fiasan'ny fanovana bitsika
Tamin'ny resadresaka farany niarahana tamin'i Jack Dorsey dia niresaka momba ny fomba fiasan'ilay asa nandrasana hatry ny ela ny fanovana ireo bitsika navoaka izy.
Ahoana ny fanandramana ny beta an'ny fampiharana Microsoft tsy hita ao amin'ny Play Store
Microsoft, toa ny Google, Apple ary ny developer hafa dia manao ny betas an'ny ...
Firefox for Android dia hanakana ny autoplay video
Fantaro misimisy kokoa momba ny fanavaozana ny Firefox izay havoaka amin'ny fomba ofisialy amin'ny volana martsa ary hitondra ity endri-javatra manan-danja ity amin'ny Android.
Pokémon TCG Card Dex: Ny App Vaovao ho an'ny Pokémon Card Collectors
Fantaro misimisy kokoa momba ny Pokémon TCG Card Dex, ny fampiharana ho an'ny mpanangona karatra Pokémon ahafahanao mijery ireo karatra.
Ny fampiharana toetr'andro tsara indrindra miaraka amin'ny widget amin'ny Android
Jereo ireto rindranasa momba ny toetrandro ireto ho an'ny Android izay misongadina amin'ireo widgets marobe misy hanamboarana ny telefaona.
WhatsApp dia efa mamela anao misintona sticker amin'ny tsirairay
Fantaro misimisy kokoa momba ilay fiasa vaovao amin'ny WhatsApp izay ahafahan'ny mpampiasa misintona pirinty tsirairay amin'ny fomba tsotra.
Raketo feo amin'ny Arorderound Audio Recorder hiteraka rohy playback
Aroundsound Audio Recorder dia ahafahanao mampakatra ireo audio voarakitra amin'ny rahona ary avy eo mamorona rohy hizara azy ireo avy amin'ny tranonkala.
Kely sisa tavela ho anao hampiasa ny dian-tanananao hidirana amin'ny WhatsApp
WhatsApp dia nandefa tao amin'ny iOS ny safidy ahafahana manamboatra efijery hidin-trano mba hijerena ny dian-tànana ary hijerena ireo hafatra.
Ny ARCore an'i Google dia mifanaraka amin'ny Samsung J5 sy J5 Pro ankehitriny
Tao anatin'ny roa taona lasa, dia samy nahita ny nifantohan'ny Google sy i Apple tamin'ny famoronana sy fanatsarana ny ...
Samsung Flow dia haingana be kokoa taorian'ny fanavaozana farany
Ny rindranasa Samsung Flow dia tsy mamela antsika hifandray haingana kokoa amin'ny fitaovantsika noho ny fifandraisana Wi-Fi
WhatsApp dia hitondra fandoavam-bola amin'ny finday any amin'ny firenena maro
Fantaro bebe kokoa ny fanitarana ny fandoavam-bola amin'ny finday amin'ny WhatsApp izay hahatratra firenena vaovao toa an'i Mexico sy Etazonia amin'ny 2019.
Ny Adobe Photoshop Express dia hamela antsika hanova ny haben'ny mari-drano ary hanampy sivana vaovao
Ny fanavaozana manaraka ny Adobe Photoshop Express dia ahafahantsika, amin'ny maha-zava-baovao indrindra, ny manova ny haben'ny mari-drano ampidirinay.
Poweramp Music Player Mifanaraka amin'ny fomba ofisialy amin'ny Android Auto
Ny Android Music Player Poweramp dia nohavaozina mba hanolorana ny fanohanana Android Auto amin'ny fomba ofisialy ary tsy hampiasa tetika kely.
TUR4all: Ny fampiharana mamela anao hahita toeram-pizahan-tany sy hetsika atao
Fantaro bebe kokoa momba ny fampiharana TUR4all mikendry fizahan-tany azo idirana any Espana sy Portugal ary ny fomba fiasan'izy io.
Telegram dia mamela anao hanamboatra ny sary an-tsoratry ny chat amin'ny endriny vaovao
Fantaro misimisy kokoa momba ilay fiasa vaovao hanamboarana ireo rindrambaiko izay natolotra tao amin'ny kinova Telegram vaovao misy ankehitriny.
Ny fiasa mahaliana indrindra an'ny Gboard amin'ny Android
Fantaro misimisy kokoa momba an'ity andiana fiasa ity, miafina ny sasany amin'izy ireo, izay azo ampiasaina amin'ny Gboard ary mamela ny fampiasana tsaratsara kokoa ny klavier.
Avelao izy hivoaka miaraka amina sary mihetsika misy aingam-panahy Nexus 5 avy amin'ny Parallax 3D Wallpaper
Parallax 3d Wallpaper dia fampiharana iray ahafahanao manana ny sary an-tsary Nexus 5 mivantana miverina miverina amin'ny telefaona Android anao manomboka izao.
Ahoana ny fanaovana nomerika ny sarinao taratasy
Tutorial video azo ampiharina izay, amin'ny fomba tena tsotra sy mety amin'ny karazana ...
Ny tetika tsara indrindra ho an'ny satan'ny WhatsApp
Jereo ny tetika tsara indrindra ahafahanao mampiasa tsara kokoa ny satan'ny WhatsApp amin'ny fomba tena tsotra.
Ahoana ny fananana fitoeram-bokatra amin'ny Android
Jereo hoe ahoana ny fananana fitoeram-bokatra amin'ny findainao Android noho ny Dumpster, fampiharana maimaimpoana tena mahaliana.
Fampiharana fangalarana sary mangalatra: Malware vaovao ao amin'ny Google Play
Fantaro misimisy kokoa momba ity malware vaovao ity izay efa hita tao amin'ny Google Play amin'ny rindranasa fakantsary izay efa nesorina tamin'ny fomba ofisialy.
Q12, Ny fifaninanana mandresy any Espana izao dia tonga any Amerika Latina # Q12Mex
Taorian'ny fahombiazan'ny Q12 Trivia be dia be, izao ny fifaninanana malaza dia manomboka ny zava-miafina any Amerika Latina miaraka amin'ny fampiharana Q12 Mex.
Google+ dia hampidina ny jamba ho an'ny mpampiasa amin'ny 2 aprily
Google goavambe fikarohana Google dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny daty hanohizany amin'ny fanidiana ofisialy ny tambajotra sosialy Google+. Amin'ny 2 aprily 2019 izao
Ireo mpandahateny Sonos dia mifanaraka amin'ny YouTube Music ankehitriny
Ny fianakavian'ireo mpandahateny Sonos dia mifanaraka amin'ny serivisy mozika streaming Google YouTube Music sy YouTube Premium.
Google Chrome 72 dia tonga amin'ny Android miaraka amin'ny fiasa vaovao maromaro
Fantaro misimisy kokoa momba ny vaovao ampidirina ao amin'ny kinova Google Chrome vaovao amin'ny Android izay novaina ho amin'ny andiany 72.
Fampiharana hamerenana ireo horonantsary voafafa amin'ny Android
Jereo ity safidin'ireo rindranasa telo ho an'ny Android ity izay ahafahanao mamerina mora foana ireo horonan-tsary nofafanao tamin'ny telefaonao.
Fampiharana ho an'ny ankizy: Ankehitriny manao sary amin'ny fasika
Manomboka fizarana vaovao ao amin'ny Androidsis izahay, fizarana horonan-tsary izay hanavaozantsika tsy tapaka an'ity lahatsoratra ity hanoroana ireo rindranasa tsara indrindra ...
Fampiharana Android hahazoana vola amin'ny findainao
Jereo ity safidin'ny rindranasa efatra misy amin'ny telefaona Android ity ahafahanao mahazo vola amin'ny findainao.
Ahoana ny fanovana ny hafainganam-pandehan'ny playback an'ny YouTube
Ny fanovana ny hafainganam-pandehan'ny playback an'ny YouTube dia mamela antsika hahatratra ny fotoana mahaliana indrindra nefa tsy hahavery ny ampahany amin'ny atiny.
[ROOT] Logo +, ny solon'ny Razer Phone 2 Chroma hanamboarana ny sary mamirapiratra
Logo + no loharanom-baovao misokatra amin'ny fampiharana Chroma ao amin'ny Razer Phone 2 amin'ny fanaingoana ny sary mamirapiratra ao aoriana.
Google Play Store dia mametraka ny fifantohana amin'ny lalao sy ny fampiharana amin'ny fanavaozana vaovao
Na dia aparitaka isam-paritra aza izy io, ity zava-baovao ity dia manala ny tab rehetra avy amin'ny Google Play Store afa-tsy ny fampiharana sy lalao.
Fampiharana soccer 4 tsy azonao adino
Horonantsary izay amoriako ny fampiharana baolina kitra efatra mba hahafantaran'ny ankamaroan'ny mpankafy soccer ny zava-mitranga eo amin'ny tontolon'ny baolina.
Ahoana ny fanovana ny famahana ny horonantsary YouTube hitahirizana angona
Asehonay aminao ny fomba ahafahanay manova ny famahana ny horonantsary YouTube mivantana amin'ny rindranasa Android.
Fampiharana Android hahazoana bebe kokoa amin'ny WhatsApp
Jereo ity safidin'ireo rindranasa Android ity izay ahafahanao mahazo bebe kokoa amin'ny WhatsApp amin'ny findainao amin'ny fotoana rehetra.
Pejy mavo dia nahazo fanavaozana lehibe
Yellow Pages dia lahatahiry lehibe an'ny orinasa, serivisy ary matihanina azonao amin'ny fampiharana findainao.
Hanolotra fanohanana amin'ny sary WebP i Firefox 65
Ny fanavaozana manaraka ny Firefox ho an'ny Android dia hanolotra fanohanana amin'ny endrika endrika WebP avy amin'i Google.
App amin'ny rivotra: Izay ilainao amin'ny sidinao amin'ny fampiharana iray
Fantaro bebe kokoa momba ny App in the Air, ity rindranasa Android ity izay ahafahanao manana fifehezana tonga lafatra amin'ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny sidinao.
Ahoana ny fampidinana ny fisoratana anarana mialoha amin'ny fisoratana anarana amin'ny Android
Jereo hoe ahoana no ahafahanao misintona lalao na fampiharana izay efa voasoratra anarana tao amin'ny Google Play teo amin'ny telefaona Android anao.
WhatsApp dia mamela anao hanao antso anaty vondrona amin'ny tsindry tokana miaraka amin'ny fiasa vaovao
Fantaro misimisy kokoa momba ny fanatsarana natolotry ny antso an-tariby tao amin'ny WhatsApp izay mamela azy ireo hatao amin'ny tsindry tokana.
Ny fampiharana Apple Music dia mifanaraka amin'ny takelaka Android ankehitriny
Ny serivisy mozika streaming an'i Apple dia nanavao ny fampiharana Apple Music mba hifanaraka amin'ny haben'ny takelaka Android.
Fampiharana Android telo ho an'ny fampiasana telefaona iray
Jereo ireto rindranasa telo ireto hampiasana ny maody amin'ny tanana amin'ny telefaona Android amin'ny fomba tena tsotra.
Ny fampiharana radio tsara indrindra ho an'ny telefaona Android
Jereo ireto rindranasa radio efatra ireto ho an'ny Android izay ahafahanao mihaino mora foana ny gara tianao amin'ny findainao.
Gmail dia miomana amin'ny fahatongavan'ny hafatra mavitrika. Fa inona izy ireo ary inona no ilana azy ireo?
Inona ireo hafatra mavitrika tokony hatosika ao amin'ny Gmail? Fantaro bebe kokoa momba an'io endri-javatra io ao amin'ny fampiharana Google Mail amin'ny Android.
Fampiharana Google Android tsy fantatra nefa tena ilaina
Jereo ireto rindranasa Google efatra ho an'ny Android izay tsy dia fantatry ny ankamaroan'ny mpampiasa fa tena ilaina.
Skype dia nohavaozina ary manampy hafatra SMS sy asa hafa
Microsoft dia mamoaka fanavaozana vaovao amin'ny antso an-tsarimihetsika Skype sy ny fampiharana fandefasana hafatra eo noho eo. Miaraka amin'ny vaovao mahaliana izy io.
Mamorona avatar anao manokana hitondra azy amin'ny zava-misy mitombo miaraka amin'i Kouji
Kouji dia fampiharana vaovao izay toa ny maro hafa toa ireo natombok'i Apple sy Samsung. Mamorona avatar anao manokana hamelona azy io.
Ahoana ny fomba hampiasana ny sivana vaovao sandoka ao amin'ny Microsoft Edge
Mba hanandramana manampy amin'ny fisorohana ny vaovao sandoka tsy ho olana lehibe noho izao dia nanampy Microsoft Edge sivana iray izay mampahafantatra antsika ny fahamarinana na tsia an'ireo tranonkala vangiantsika.
Ahoana ny fomba hisorohana ny fisolokiana na malware amin'ny WhatsApp
Fantaro bebe kokoa momba ny fomba ahafahana mamantatra mora foana ny fisolokiana WhatsApp na viriosy amin'ny telefaona Android.
Fampiharana Android hahazoana bebe kokoa amin'ny Instagram
Fantaro misimisy kokoa momba ireo rindranasa dimy ho an'ny Android ahafahanao mampiasa Instagram tsara kokoa, indrindra amin'ny kaonty matihanina.
Antony 2 maninona ianao no tsy maintsy mamonjy ilay mpilalao audio Poweramp tsy hohadinoina
Poweramp dia nohavaozina amin'ny endrika vaovao 2 izay ahitanao ny fomban'ny fironana ankehitriny amin'ny finday.
Inona ny vidiny ambany indrindra amin'ny fampiharana amin'ny Google Play raha ny firenena?
Jereo hoe inona ny vidiny ambany indrindra sy ambony indrindra azo apetraka ho an'ny fampiharana ao amin'ny Google Play arakaraka ny firenena.
Ny spike dia mamadika ny mailakao ho hafatra mifampiresaka toa WhatsApp
Spike dia mpanjifa mailaka manana tombony maro ary miavaka amin'ny fanomezana traikefa hafa rehefa mitantana mailaka.
Fampiharana tena ilaina amin'ny takelaka Android
Nohavaozina 23/1/19: Nampiakatra APPS vaovao roa sy horonan-tsary VIDEO HANDY !! Manomboka fizarana horonan-tsary vaovao aho, lahatsoratra miampy horonantsary izay andehanako ...
Nilaza ny CEO Twitter fa miasa amin'ny maody maizimaizina ho an'ny Android izy
Raha ny filazan'ny CEO an'ny Twitter dia ho avy tsy ho ela ny tena maizina, izay manararaotra ny kalitaon'ny efijery OLED.
Fantaro ny fomba fitantanana, fampandehanana na fanafoanana ny fampandrenesana fanosehana ao amin'ny Google Chrome amin'ny telefaona Android anao.
Ahoana ny fametrahana ny fiaingana na ny fahatongavana ao amin'ny Google Maps: nitaky fotoana elaela ilay zava-baovao
Atorinay anao ireo dingana sy ny fomba fametrahana ny ora fiaingana na ny fahatongavana ao amin'ny Google Maps. Fampiharana iray izay mbola mahazo fanasongadinana feo ihany.
Ahoana ny fomba hizarana ny atiny Netflix amin'ny Instagram Stories anao: ny zava-baovao ho avy tsy ho ela amin'ny findainao
Zava-baovao vaovao sy mahaliana ho an'ny Instagram Stories ahafahantsika mizara ny atiny tena tianay indrindra amin'ny Netflix.
Mandrara ny fampiharana izay mampiroborobo na mivarotra akora tsy nankatoavina tao amin'ny Play Store i Google
Ny Google App Store dia nanomboka nandrara ireo fampiharana izay mampiroborobo na mivarotra akora tsy ara-dalàna any Etazonia.
Ny fanavaozana an'i Swiftkey manaraka dia hanampy maodely incognito mandeha ho azy
Ny kitendry Microsoft Swiftkey dia hanampy amin'ny fanavaozana manaraka ny fomba fanamoriana izay hahetsika amin'ny famenoana ny teny miafina ho azy.
Ny fanavaozana Telegram farany dia mamela antsika hanana fanaraha-maso bebe kokoa amin'ireo vondrona izay tantananay na noforoninay matetika.
Fantaro bebe kokoa momba ny URL Manager, ny rindranasa azonao sintonina maimaim-poana amin'ny Android ary ahafahanao manafoana URL iray amin'ny findainao.
WhatsApp dia hametra ny fandefasana hafatra
Fantaro misimisy kokoa momba ny refy vaovao amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra amin'ny ady amin'ny vaovao sandoka izay hatolotra tsy ho ela.
Ahoana ny fanamboarana ny tontonana fidirana haingana amin'ireo fampiharana tadiavinao amin'ny findainao
Avy amin'ny bara misy ny toerana misy ny fidirana amin'ny Bluetooth, GPS sy maro hafa, azonao atao ny manampy ireo fampiharana tadiavinao amin'ny App Tiles.
Spotify dia hamela anao hanakana ny mpanakanto miaraka amina endrika vaovao
Ny bokotra hidin-trano dia fiasa iray tena angatahin'ireo mpampiasa Spotify, izay ahafahanao manidy mozika mpanakanto iray. Mbola ho avy izany.
Alternative an'ny Google Fit a la Black Amoled
Fampiharana hafa amin'ny Google Fit a la Black Amoled izay hanasongadinana ny fahatsorany sy ny fanatsarana azy handany loharanon-karena vitsy dia kely.
Ny rafitra fanamafisana batterie an'ny OnePlus dia tsy mandray amina kaonty fotsy
Mihamaro ny mpampiasa mitaraina amin'ny tsy fahatomombanan'ny rafitra fanamafisana batterie OnePlus, rafitra iray manidy ny fampiharana rehetra ao aoriana
Ny kitendry antoko fahatelo izay eo ambanin'ny elo Pinterest dia vao nohavaozina ary nanampy fiasa roa mahafinaritra sy nandrasana hatry ny ela.
Jereo ny lisitry ny rindranasa fandoavam-bola amin'ny finday izay misy amin'ny telefaona Android handoavana vola any Espana.
WhatsApp dia hamela anao hampiasa stickers avy amin'ny kitendry GBoard anao
Fantaro misimisy kokoa momba ny fampidirana an'io endri-javatra io eo amin'ny WhatsApp sy Gboard izay manomboka mahatratra ireo mpampiasa fitendry amin'ny Android.
Google Assistant dia mety hanana maody maizina koa
Fantaro misimisy kokoa momba ny fampidirana ny maody maizimaizina ao amin'ny fampiharana Google Assistant izay kasaina hivoaka tsy ho ela ary andrana izao.
Ahoana ny fomba fitadiavana hafatra ao amin'ny WhatsApp
Jereo hoe ahoana no ahafahanao mitady sy mahita hafatra ao amin'ny WhatsApp resaka ary noho izany dia mahazo vaovao.
Google Duo dia hanampy lisitr'ireo vokatra ankafizinao sy horonantsary ho an'ny Andron'ny mpifankatia
Ato ambany izahay dia mampiseho aminao ny antsipirian'ny vaovao izay ho avy amin'ny fanavaozana manaraka ny antso an-tsarimihetsika Google antsoina hoe Google Duo.
Ahoana ny fomba hahatonga ny GPS amin'ny Android hiasa haingana kokoa
Jereo ity rindranasa ity ahafahanao mahazo ny GPS amin'ny findainao Android hiasa haingana kokoa amin'ny fomba tsotra.
Facebook Messenger mandefa ny interface vaovao amin'ny Android
Fantaro bebe kokoa momba ilay interface vaovao natomboka tao amin'ny Facebook Messenger izay efa manomboka mahatratra ireo mpampiasa Android ilay fampiharana.
Ahoana ny fomba hiarovana ny teny miafina fampiharana sy fisie amin'ny Android
Jereo hoe ahoana no ahafahanao miaro ny rindranasa Android anao amin'ny alàlan'ny teny miafina noho ny AppLock, fampiharana ho azy io.
Microsoft News dia nohavaozina tamin'ny fampidirana endrika vaovao telo hanehoana ny atiny
Nohavaozina ny rindranasan'ny Microsoft News mba hanomezana endrika vaovao telo hahafahanay mijery ny vaovaon'ny lohahevitra izay mahaliana anay indrindra.
Fampiharana Android hanarahana ny famoahana sarimihetsika sy ny tranofiara
Fantaro misimisy kokoa momba ireo rindranasa Android ireo izay ahafahanao manaraka ny toetr'andro miaraka amin'ireo sarimihetsika premieres sy tranofiaran-tsarimihetsika.
ActionDash, izay isolo ny tsirairay amin'ny Digital Wellbeing an'ny Google avy amin'ilay namorona ny Action Launcher
ActionDash dia fampiharana vaovao avy amin'ny mpamorona Action Launcher izay safidy tsara indrindra amin'ny Digital Wellbeing an'i Google. Azo ampiasain'ny rehetra.
Google Pay: Inona izany, ny fomba fiasany ary ny banky manohana azy
Fantaro ny zava-drehetra momba ny Google Pay, inona izany ary ny fomba fiasan'ity rafitra fandoavam-bola ity, ary koa ireo banky tohanana.
Efa manana ny kinova maimaim-poana amin'ny Kalandrie Widget ho safidy tsara hafa izahay
Widget manokana natokan'i Francisco Franco izay manana ny kinova maimaimpoana ho anao hanandramana sy hanapahan-kevitra momba ny voalohany.
Swiftkey dia haingana kokoa miaraka amin'ny fanavaozana farany
Kitendry Swiftkey an'ny antoko fahatelo an'i Microsoft dia manome antoka fa aorian'ny fanavaozana farany dia haingana kokoa noho ny fifaninanana izao.
Google Maps dia manomboka mampiseho ny toeran'ny fakantsary haingam-pandeha raikitra amin'ny arabe
Ny serivisy Google maps dia nanomboka nampiseho ny toerana misy ny fakantsary haingam-pandeha raikitra amin'ny firenena sasany
Nampahatsiahy ny mpamorona i Google fa tapitra ny fe-potoana farany hanolorana kinova 64-bit
Nampahatsiahy ny mpamorona i Google fa ny rindranasa noforonina afa-tsy 32 bits dia efa nanisa ny androny ary tokony havaozin'izy ireo ho 64 bits.
Ahoana ny fahitana ireo fidirana ao amin'ny kaontinao Instagram
Jereo hoe ahoana no ahitanao ny fidirana amin'ny kaontinao Instagram ary hamaritana raha misy olona hafa miditra raha tsy mahazo alalana aminao.
Inona avy ireo marika manidy ny fampiharana ambadika? Fanadihadiana iray no manambara izany
Fantaro bebe kokoa momba an'ity fandalinana ity izay ahafahanao mahita ireo marika any amin'ny Android mijanona fampiharana aoriana mba hanatsarana ny fiainana bateria.
Zoom, ny fampiharana fivoriana misy antso an-tsary sy horonan-tsary avo lenta izay mahomby
Miaraka amin'ny Zoom dia tsy mila misoratra anarana akory ianao haka rohy iray, miditra miaraka aminy ary mifandray amin'ny fivorian'ny matihanina na namana.
Ahoana ny fanasokajiana ireo sioka araka ny vanim-potoana amin'ny fampiharana Twitter
Raha reraka ianao tsy afaka mamaky ny sakafonao Twitter amin'ny alàlan'ny rindranasa ofisialy, dia hasehonay anao ny fomba fanaovana izany amin'ny finday Android-nao.
Ahoana ny fomba fandraisam-peo amin'ny fomba 80s amin'ny findainao miaraka amin'ny fampiharana ampiasain'ny olona malaza
VHS Camcorder dia ahafahanao mirakitra horonantsary miova amin'ny fomba 80 mba hahafinaritra miaraka amin'ireo namanao amin'ny famokarana horonantsary avo lenta.
Ny rindranasa tsara indrindra hanararaotana ny Chromecast
Jereo ity safidin'ireo rindranasa Android efatra ity izay hanararaotra ny Chromecast amin'ny fahitalavitrao amin'ny fomba tsotra.
Ny safidy tsara indrindra amin'ny Gmail ho an'ny Android
Jereo ireto rindranasa efatra hafa ireto ao amin'ny Gmail hahafahanao mitantana ny mailakao amin'ny Android.
Google dia manomboka manala ny fampiharana miaraka amin'ny fidirana amin'ny SMS sy ny log de log
Fantaro misimisy kokoa ny fanovana ao amin'ny Play Store izay hanafoanan'i Google ireo rindranasa afaka mahazo alalana hiantso sy SMS.
Manomboka anio dia handoa bebe kokoa ianao amin'ny Netflix: ny fiakarana avo indrindra amin'ny serivisy
Netflix, miaraka amin'ny fialan-tsiny amin'ny faniriana bebe kokoa hamokatra ny atiny manokana, dia nanao ny fiakaran'ny vidiny manan-danja indrindra amin'ny tantarany.
Ahoana ny fomba hahazoana ny vokany loko amin'ny sary mainty sy fotsy
Tutorial video izay asehoko anao ny fomba hahazoana ny vokan'ny loko amin'ny sary nalaina mainty sy fotsy, vokatra manasongadina loko tena manintona.
Google Pay dia manampy banky vaovao mifanaraka amin'ny Espana sy ny firenena hafa.
Ny serivisy fandoavam-bola elektronika Google Pay dia nanampy fanampiana tany Espana momba ny Fikomiana Pay, mpamoaka karatra Mastercard mialoha
Ny fomba rehetra hanokafana ny Google Assistant amin'ny Android
Jereo ny fomba rehetra anananay amin'ny finday Android hahafahanay manokatra ny Google Assistant amin'ny fomba tsotra.
Ny mpanampy Google izao dia misy amin'ny tranokala Google ihany koa
Fantaro misimisy kokoa momba ny fampidirana ny Google Assistant amin'ny tranokala Google, izay azo idirana avy amin'ny tranokala amin'ny Android.
Google dia te-hanolotra kopia voasoratra an-tsoratra momba ireo podcast hita eo amin'ny lampihany
Ny fanavaozana manaraka ny fampiharana Google Podcast dia hamadika podcast ho azy noho ny Art Intelligence.
Ahoana ny fomba hananganana karatra banky amin'ny Instagram
Jereo hoe ahoana no ahafahanao mampiditra ny carte de crédit anao amin'ny Instagram hahafahanao mividy amin'ny tambajotra sosialy.
Ahoana no hahalalana raha mila manova ny batterin'ny telefaona Android ianao
Fantaro bebe kokoa momba ny fomba ahafahanao manamarina ny satan'ny baterinao amin'ny telefaona Android anao noho ny fampiharana iray.
Inona no ary ahoana no fiasan'ny Miracast?
Miracast: inona izany, ny fomba fiasa ary ny fivoarany. Fantaro bebe kokoa momba an'ity haitao ity sy ny maha-zava-dehibe izany amin'ny Android.
Ahoana ny fomba hanesorana ireo fampiharana marobe amin'ny fotoana iray tsy misy faka ao amin'ny Google Play
Fantaro misimisy kokoa momba ilay fiasa vaovao tonga tao amin'ny Google Play, izay ahafahantsika manaisotra rindranasa marobe amin'ny fotoana iray.
Ireo vaovao rehetra tonga amin'ny Google Assistant amin'ny taona 2019
Google Assistant dia hanana taona mahafinaritra miaraka amina andian-dahatsoratra vaovao izay hampiakatra ny kalitaon'ny traikefa omeny ankehitriny.
VLC mpilalao ho an'ny Android dia hanampy fanampiana ho an'ny AirPlay
Ny mpilalao audio sy video VLC mahafinaritra dia vao avy nanambara fa handray ny fanohanan'ny AirPlay amin'ny fampiharana farany ny rindranasa Android.
Ahoana ny fametrahana Stingray Music, safidy tsara indrindra amin'ny Spotify, maimaim-poana ary tsy misy doka
Tutorial video izay asehoko anao ny fomba fametrahana Stingray Music, safidy iray hafa amin'ny Spotify maimaimpoana ary tsy misy doka izay tsy misy amin'ny faritany Espaniôla.
Google Play Books no fampiharana farany indrindra handraisana Material Design
Ny fanavaozana manaraka ny fampiharana Google Play Books dia manome antsika fanavaozana ny interface amin'ny Theme Theme
Google Play Music mandoa vola maimaim-poana mandritra ny telo volana
Fantaro bebe kokoa momba ity fampiroboroboana ity izay hahafahanao manandrana Google Play Music maimaim-poana mandritra ny telo volana.
YouTube Music dia ho lasa mpilalao mozika Android
Fantaro misimisy kokoa ny momba ny drafitr'i Google hahatonga ny YouTube Music ho mpilalao mozika amin'ny Android.
Mamitaka ny Google Translate amin'ny Android
Jereo ireto tetika tsotra efatra ireto hahafahanao manararaotra ilay mpandika teny Google amin'ny telefaona Android anao.
Facebook Messenger mandefa interface madio sy tsotra kokoa
Fantaro misimisy kokoa ny momba ilay interface vaovao nampidirina tao amin'ny Facebook Messenger, izay tsotra kokoa, izay mampanantena fa hahomby kokoa.
Roadstr, ny tambajotra sosialy ho an'ireo mpankafy fiara sy ny tontolon'ny motera
Roadstr, tambajotra sosialy vaovao natao ho an'ny mpamily sy ho an'ireo mpankafy rehetra ny tontolon'ny motera. Misy foana…
Ny Instagram dia efa mamela ny fandefasana kaonty marobe amin'ny fotoana iray, fa amin'ny iOS ihany izao
Ny tambajotra sosialy tsara indrindra dia manampy safidy hamoaka lahatsoratra amin'ny fotoana iray amin'ny kaonty maro. Mitombo hatrany ny asan'ny Instagram.
Ahoana ny fomba hanampiana effet blur na fampiharana mode portrait amin'ireo sary nalaina tamin'ny Android-nao
Fampianarana an-tsary izay anazavako ny fomba fampiharana ny maody sary amin'ny sary nalaina tamin'ny karazana terminal Android. Valiny mahatalanjona !!
WhatsApp dia hamela anao handefa raki-peo maro miaraka amin'izay
Fantaro bebe kokoa momba ny fiasa vaovao tonga amin'ny WhatsApp izay ahafahan'ny mpampiasa mandefa raki-peo marobe amin'ny fotoana iray.
Tetika 5 an'ny Samsung Secure Folder mba hahazoana tombony betsaka amin'izany
Ny Secure Folder dia singa iray lehibe amin'ny Samsung ary mamela antsika hanokana ireo fampahalalana rehetra tadiavintsika amin'ny fomba fijerin'ny hafa.
Google dia miasa amin'ny fampidirana maody maizina amin'ny Chrome ho an'ny Android
Araka ny lahatsoratra navoaka tao amin'ny Chromium, Google Chrome ho an'ny Android dia mety hahazo lohahevitra maizina amin'ny fanavaozana ho avy.
Android Auto dia hanolotra fanampiana ho an'ny fampiharana Google Podcast
Ny fanavaozana manaraka ny fampiharana Google ho an'ny Android Auto dia hanolotra anay mifanentana amin'ny fampiharana Google Podcast.
Ahoana ny fanaovana sonia antontan-taratasy avy amin'ny Android
Tutorial video izay anazavako ny fomba tsara indrindra hanaovana sonia antontan-taratasy avy amin'ny Android freehand miaraka amina fampiharana maimaim-poana.
Tsy ho ela ianao dia afaka miaro ny WhatsApp amin'ny dian-tànanao
Fantaro misimisy kokoa momba ilay fiasa vaovao ho avy tsy ho ela ao amin'ny WhatsApp izay hahafahanao miaro ny fampiharana amin'ny alàlan'ny dian-tànanao.
Ahoana ny fomba hijerena hafatra manokana avy amin'ny Facebook Messenger nefa tsy mampiasa fampiharana
Jereo hoe ahoana no ahafahanao mijery ny hafatrao amin'ny Facebook Messenger, anisan'izany ireo tsy miankina amin'ny Android nefa tsy mampiasa fampiharana.
Ahoana ny fomba hidirana amin'ny tantaran'ny YouTube amin'ny Android
Raha nanontany tena ianao hoe ahoana no ahafahantsika miditra amin'ny tantara an-tsehatra YouTube avy amin'ny terminal Android anay, dia hasehonay anao ny fomba
Bixby dia hampiditra ny rindranasa Google
Fantaro bebe kokoa momba ny fanamafisana fa hampiditra ny rindranasa Google i Bixby araka izay efa nambarany avy amin'ny Samsung tao amin'ny CES 2019.
Google Assistant dia eo amin'ny fitaovana iray tapitrisa tapitrisa
Fantaro bebe kokoa ny isan'ny fitaovana erak'izao tontolo izao izay efa ho tratran'ny Google Assistant araka ny nambaran'ny orinasa tamin'ity herinandro ity.
Sony manakana ny fampiasana sy ny fametrahana Kodi amin'ny fahitalavitra amin'ny Android TV
Sony dia nanomboka nanakana ny fampiasana sy ny fametrahana ny fampiharana Kodi amin'ny fahitalavitra tantaniny Android TV
Huawei dia manolotra rindranasa iray izay mamadika ny endrika ho lasa feo
Fantaro bebe kokoa momba ny fampiharana vaovao an'i Huawei ho an'ireo jamba izay manova ny endrika ho lasa feo ho an'ny jamba.
Ahoana no hianarana tenin'ny tanana amin'ny Android
Jereo ny fomba hianarana tenin'ny tanana amin'ny telefaona Android anao noho ny fampiharana LSApp, azo alaina maimaimpoana izao.
Ahoana ny fampiasana extension Google Chrome amin'ny findainao Android
Fantaro ny fomba fampiasana ny extension Google Chrome amin'ny Android noho ny browser Rosiana Yandex izay manome anao io asa io.
Ahoana ny fomba hitsitsiana hafatra amin'ny Telegram
Jereo ny fomba ahafahanao mitahiry hafatra amin'ny fampiharana Telegram ka tsy hahafoana an'ity fampahalalana ity amin'ny fotoana rehetra.
Ahoana ny famakafakana malware amin'ny Android amin'ny Play Protect
Fantaro bebe kokoa momba ny fomba fitiliana ireo fampiharana napetrakao amin'ny telefaona Android anao ho an'ny malware amin'ny alàlan'ny Google Play Protect.
Apex Weather dia fampiharana toetr'andro hafa, fa avy amin'ilay mpandefa fampiharana malaza
Raha mitady fampiharana toetr'andro vaovao ho an'ny finday Android ianao dia mety ho Apex Weather io. Fampiharana vaovao avy amin'ny ekipa ekena.
Facebook Messenger dia efa nandramana maody maizina
Fantaro misimisy kokoa momba ny fitsapana voalohany izay tanterahin'ny Facebook Messenger miaraka amin'ny maody maizina ao amin'ilay fampiharana. Ho avy tsy ho ela amin'ny Android.
Google Maps dia mamela anao handefa hafatra amin'ny orinasa
Fantaro misimisy kokoa momba ilay fiasa vaovao izay navotsotra tao amin'ny Google Maps izay ahafahanao mandefa hafatra amin'ireo orinasa ao amin'ilay fampiharana.
Google Duo dia efa mitsapa ny fiantsoana horonantsary vondrona
Google Duo dia manomboka mitsapa ny antso an-tariby ataon'ny vondrona. Fantaro misimisy kokoa momba ilay fiasa vaovao tonga amin'ilay fampiharana antso an-tsary.
Snapchat manampy sivana ho an'ny alika
Ny sivana farany izay nanampy Snapchat tamin'ny fampiharana azy dia ahafahantsika manampy singa haingon-trano ho an'ny alikantsika.
Fampiharana tsara hafa handefasana mozika maimaim-poana amin'ny mp3
Lahatsary horonantsary izay ihinanako anao ary asehoko anao ny fandefasana fampiharana hafa tsara handefasana mozika maimaimpoana amin'ny endrika mp3.
Google Messages dia mampihetsika ny fiarovana anao amin'ny spam
Fantaro misimisy kokoa momba ilay fiasa vaovao tonga amin'ny Google Messaging izay manampy ny mpampiasa hiaro tena amin'ny hafatra spam.
Google Fit dia mandefa ny fanambin'ny Taom-baovao
Jereo ny fanamby vaovao natombok'i Google Fit amin'ity taona vaovao hametrahan'ny mpampiasa endrika endrika tsotra ity.
Ahoana ny fananana ny fakantsary Google Pixel ao amin'ny Galaxy S9 na Note 9 miaraka amin'ny UI iray
Androany iDan, mpamorona fanta-daza ao amin'ny XDA Developers, dia namoaka ny kinova miasa an'ny fakantsary Google ho an'ny Galaxy S9 sy Note 9 ao amin'ny One UI.
Nanova ny fahana ho marindrano ny Instagram ary gaga ny maro
Nanaitra ny mpampiasa maro ilay interface vaovao izay mahita ny fiovan'ny fahana mahazatra amin'ny Instagram tanteraka.
Mpandefa Windows 10 tsara indrindra ho an'ny Takelaka Android
Lahatsary-video izay anoroako anao izay ho ahy no Windows 10 Launcher tsara indrindra ho an'ny Takelaka misy rafitra fiasa Android.
Ahoana ny fomba hamafana maharitra ny kaontinao Instagram
Jereo ny dingana tokony harahinao mba hamafana mandrakizay ny kaontinao Instagram, azo atao amin'ny telefaona Android anao.
MINT Browser no mpizaha tranonkala vaovao an'i Xiaomi ho an'ny fitetezana haingana sy azo antoka
Xiaomi dia manatevin-daharana ireo mpanamory tranonkala marobe izay ananantsika amin'ny Android miaraka amin'ny Mint Browser, fampiharana tena kanto ho an'ny findainao.
Netflix dia mizaha ny famandrihana 7 andro amin'ny 2,49 euro
Tsy ho ela i Netflix dia hanangana karazana famandrihana hafa tsy mitovy amin'ny efa hitantsika. 7 andro mandritra ny 2,49 euro hijerena ireo andian-tantara tianao.
Amazon Prime Video dia efa navoaka in-100 tapitrisa mahery tamin'ny Android
Ny fampiharana Amazon Prime Video dia nahatratra 100 tapitrisa fisintomana tao amin'ny Google Play Store irery
Samsung Internet dia manavao ny fanatsarana ny fidirana amin'ny Bixby ary ny fanafainganana ny fampidinana
Iray amin'ireo mpitety tranonkala tsara indrindra ao amin'ny Play Store, Samsung Internet, izay vao nohavaozina tamin'ny fanatsarana ny hafainganan'ny fampidinana rakitra sy ny fampidirana azy amin'ny Bixby
Google Play dia hampandre antsika izay ahafahantsika mampiasa karatra fahatokisana
Ny fanavaozana manaraka ny Google Pay dia hampahatsiahy antsika raha toa ka ao anaty orinasa na orinasa manome karazana karatra fahatokisana isika.
Huawei Pay dia manomboka ny fanitarana azy eropeana
Ny serivisy fandoavam-bola elektronika an'i Huawei, natao Batemy ho Huawei Pay, dia azo alaina ao Russia ankehitriny, izay firenena voalohany aorian'i Sina, no nandefa azy.
Ahoana ny fomba hizarana ireo mpifandray aminao amin'ny alàlan'ny WhatsApp
Jereo ny fomba tsotra ahafahantsika mizara fifandraisana amin'ny olona hafa mampiasa WhatsApp amin'ny finday Android.
Ahoana ny fomba fampidinana horonantsary Facebook amin'ny Android
Tadiavo ireo fomba azo anaovana fampidinana horonantsary Facebook amin'ny findainao Android. Fomba roa azo atao amin'izany.
Google Duo dia mahatratra XNUMX miliara ny fisintomana
Fantaro bebe kokoa momba ny isan'ny fisintomana izay efa azon'i Google Duo tao amin'ny Play Store tamin'ny fomba ofisialy tato anatin'ny andro vitsivitsy.
Nova Launcher Prime tsy misy afa-tsy 0,59 euro
Raha te hampidina ny Nova Launcher Prime maimaim-poana ianao dia azonao atao izao manararaotra ny tolotra, satria 0,59 euro ihany no misy azy.
Ahoana ny fomba fampidinana horonantsary Twitter amin'ny Android
Jereo ny fomba rehetra anananay ankehitriny hisintomana horonantsary Twitter amin'ny finday Android.
95% amin'ireo fampiharana an'ny ankizy ao amin'ny Play Store no tsy mety amin'izy ireo, araka ny fanadihadiana iray
Ny fanadihadiana natao dia nanambara fa ny 95% -n'ny fampiharana rehetra ho an'ny ankizy ao amin'ny Play Store dia tsy mety amin'izy ireo.
Ireo no fampiharana sy lalao izay nahazoana vola be indrindra tamin'ny taona 2018
Ireto ny fampiharana sy lalao namokatra vola be indrindra tamin'ny taona 2018. Fantaro hoe iza amin'ireo rindrambaiko no nahazoana vola be indrindra.
Memoria dia galerie vaovao mahavariana ho an'ny findainao
Memoria dia rindrambaiko fampirantiana sary vaovao tonga amin'ny fotoana mety indrindra: rehefa manjavona tsy ho ao amin'ny Google Play Store i QuickPic.
Nanjavona tanteraka tao amin'ny Google Play Store i QuickPic
QuickPic, ilay galerin-tsary quintessential ho an'ny Android tamin'ny voalohandohany, dia nanjavona tanteraka tao amin'ny Google Play Store.
Ahoana ny fametrahana Google Canvas, ilay fampiharana sary Google vaovao
Ahoana no hahalalana raha mihena amin'ny fotoana voafaritra ny WhatsApp
Jereo ny fomba ahafahanao mahalala raha latsaka tamin'ny fotoana rehetra i WhatsApp amin'ny telefaona Android anao ka hahafantatra ny satan'ilay fampiharana.
Ahoana ny fomba hamafana ireo fifandraisana misy dika mitovy amin'ny telefaona Android anao
Jereo ny dingana ahafahantsika mamarana ny fifandraisana misy dika mitovy amin'ny finday Android amin'ny alàlan'ny fampiharana Google contact.
Ahoana ny fomba hamoronana vondrona WhatsApp izay mpitantana irery no afaka miteny
Jereo ireo dingana hahafahana mamorona vondrona ao amin'ny WhatsApp izay mpitantana irery no afaka miteny ao. Nanazava tsikelikely.
Google Photos dia avo roa heny ny fetran'ny sary sy horonan-tsary ao amin'ny Live Albums
Fantaro bebe kokoa momba ny fanovana ny fetran'ny sary sy horonantsary azo tehirizina ao amin'ny Albums mivantana ao amin'ny Google Photos.
Fanavaozana ny Google Play miaraka amin'ny loko vaovao, karatra fandinihana ary maro hafa
Fantaro misimisy kokoa momba ireo fanovana natolotry ny Google Play amin'ny fotoana fanavaozana vaovao izay mihodina amin'ny Android.
Ahoana ny fomba fandraisam-peo ny efijery findainao nefa tsy dokam-barotra sy maimaim-poana amin'ny MNML Screen Recorder
MNML Screen Recorder dia fampiharana tsara handraketana ny efijery findainao ary, na dia eo amin'ny dingana beta aza izy io dia mety tsara amin'ireo tolona ireo.
Miala amin'ny fampandrosoana Android Beam i Google
Fantaro bebe kokoa momba ny famaranana ny Android Beam. Google mandao ny fampandrosoana ity serivisy famindrana rakitra NFC ity.
Ahoana ny fomba hampiasana ireo tolo-kevitra vaovao ao amin'ny Google Chrome
Fantaro misimisy kokoa momba ny fampisehoana tolo-kevitra vaovao izay efa nampidirina tao amin'ny Google Chrome amin'ny Android sy ny fomba hampiasana azy.
Ahoana ny fomba hiarovana ireo sary somary mitsangana ao amin'ny findainao miaraka amin'ny Cover
Saika isika rehetra dia manana ireo sary izay tsy tiantsika hisy hahita ary indraindray adinontsika fa ao amin'ny galeriana izy ireo. Manampy antsika ny fonony.
Gboard dia efa manohana fiteny maherin'ny 500
Dingana lehibe ho an'ny Gboard izay afaka mirehareha amin'ny fanohanany fiteny mihoatra ny 500 amin'ny 2 taona niainany hatramin'ny nanombohany.
Ahoana ny fomba handresena ny fifaninanana lamaody tena izy
Ahoana ny fomba ahazoana vola tena izy amin'ny filalaovana ny fifaninanana finday izay mahavoa anao amin'ity Noely ity. Concourso tsy misy dikany izay hanamafisanao ny fahalalanao.
Ny Twitter dia hamela ny mpampiasa hiverina amin'ny filaharan'ny fotoana
Fantaro misimisy kokoa momba ilay fiasa vaovao nampidirina tao amin'ny Twitter izay ahafahan'ny mpampiasa miverina amin'ny filaharan'ny fotoana. Azo alaina tsy ho ela amin'ny Android.
Fetsy hivezivezy tsara ao amin'ny Google Chrome
Fantaro misimisy kokoa momba ireo tetika efatra ireo hahafahanao mivezivezy tsara kokoa ao amin'ny Google Chrome amin'ny alàlan'ny findainao Android.
Facebook Messenger dia manampy maody maodely sy sary sticker miaraka amin'ny zava-misy marina
Fantaro bebe kokoa momba ny fanavaozana izay tonga ao amin'ny Facebook Messenger izay mampahafantatra fomba maody na sticker amin'ny zava-misy marina.
LineageOS dia mankalaza roa taona lasa amin'ny telefaona efa ho roa tapitrisa
Fantaro misimisy kokoa momba ny tsingerintaona faharoan'ny LineageOS amin'ny Android sy ny tarehimarika fampiasana ROM izay navotsotra tamin'ny orinasa.
Ahoana ny fomba hamoronana ilay horonan-tsary famintinana ny taonanao amin'ny Facebook
Fantaro misimisy kokoa momba ireo dingana hamoronana horonan-tsary miaraka amin'ny famintinana ny taonanao ao amin'ny Facebook amin'ny fomba tsotra amin'ny findainao Android.
Shazam dia nohavaozina amin'ny fanesorana tanteraka ny doka
Ny fampiharana hahafantarana ny hira Shazam, izay vao nohavaozina mba hanesorana tanteraka ny doka amin'ity sehatra ity.
Ny tantara Instagram dia havaozina miaraka amin'ny vaovao mahaliana
Ny fanavaozana farany ny Instagram Stories dia hahafahantsika mamaly fanontaniana amin'ny alàlan'ny mozika, manampy countdowns ary effets vaovao.
Ny kaonty Apple Music dia mi-tweet miaraka amin'ny Android
Ny kaonty Apple Music ao amin'ny Twitter dia nampiasa smartphone Android hamoahana sioka vitsivitsy avy amin'ny sehatry ny mozika streaming an'ny
Izay rehetra atolotry ny Fubo TV ho antsika, ny famandrihana ny Movistar Series ary fantsom-panafody telo ambin'ny folo hafa, mora kokoa eny an-tsena
Famerenana video sy hevitra manokana momba ny serivisy Fubo Tv, ny famandrihana Movistar Series mora indrindra eo amin'ny tsena ankehitriny.
Ahoana ny fomba hanajanonana ny fampandrenesana YouTube amin'ny Android
Jereo ny dingana tsy maintsy arahinay amin'ny fampiharana YouTube amin'ny Android hanafoanana ireo fampandrenesana fampiharana.
Clean News dia fampiharana vaovao tsy manara-maso vaovao izay mampiseho loharanom-pahalalana marobe
Raha mitady fampiharana vaovao mazava sy tsy misy fanarahana ianao, toy ny fampiharana hafa, Clean News no fampiharana tonga lafatra ho azy. Maimaimpoana amin'ny Android.
Ilay Windows Phone Launcher tsara indrindra !!
Ahoana ny fomba hamoronana ny Instagram Top Nine amin'ny Android
Jereo ny fomba ahafahanao mamorona montage Top Nine miaraka amin'ireo sary sivy malaza indrindra izay nakarinao tao amin'ny Instagram tamin'ity taona ity.
Ahoana ny fomba hanokafana tabilao vao mihidy ao amin'ny Chrome ho an'ny Android
Raha hanokatra indray ireo takelaka izay nikatonantsika tsy nahy dia tsotra be izany raha manaraka ny dingana izay tsipiriany ato amin'ity lahatsoratra ity isika.
Ny Huawei Mate 20 dia mifanaraka amin'ny atiny HDR avy any Netflix
Ireo tovolahy ao amin'ny Netflix dia nanitatra ny isan'ny fitaovana izay, amin'ny fomba ofisialy, dia efa mifanaraka amin'ny atiny ao amin'ny HD sy HDR izay atolotry ny sehatra antsika.